Great Places Na Europe ileta na March | Save A Train
Home > Travel Europe > Great Places Na Europe ileta na March
mt bụ akaha ka atụmatụ ụzọ mgbapụ na March, n'ihu nke Easter agbagharị. Na ụmụaka ịbụ na ezumike, ugbu a bụ oge ịchọta ohere iji leta onye ị hụrụ n'anya wee leta obere agwaetiti pere mpe, malite n'elu akpa akwa njem njem ezinụlọ nke afọ, emikpu onwe gị na ụfọdụ nke ụwa kasị kpokọtara obodo ma ọ bụ ịga otu n'ime ọtụtụ European ememme na March. E nwere ọtụtụ nke ukwuu ebe na Europe ileta na March.
dị ka e kwuru, March bụkwa mmalite nke ememe oge na Europe, otú e nwere tọn ohere iji mee ka nma na obodo, ọ ga-abụ na a citrus-n'ike mmụọ nsọ ngagharingosi n'ebe ndịda France, ma ọ bụ na The London Coffee Festival.
Njikere na-achọpụta Great ebe na Europe ileta na March? Gụọ na!
Great ebe na Europe ileta na March: London
Dị ka ha na-ekwu, 'Ụbọchị ọjọọ na London ka mma karịa ụbọchị dị mma ebe ọ bụla' ya mere, London nwere na-na anyị na ndepụta nke oké ebe na Europe ileta na March.
March bụ oké ọnwa ileta Kensington Obí Gardens, Kew Gardens, ma ọ bụ ihe ọ bụla nke Nke ọzọ London elu ubi, dị ka oké osimiri nke crocuses na daffodils oge ntoju gafee isi obodo.
Ọ bụrụ na ị na-atụle na-eleta ọtụtụ ndị n'elu nkiri, mgbe ahụ, anyị nwere ike ikwu na-onwe gị a njem nleta discount kaadị ma ọ bụ a tour ụgbọ ala ngwakọta tiketi. Ndị a tiketi na n'ùkwù n'ùkwù ike azọpụta gị ụfọdụ dị oké njọ ego!
Anyị na-na na nnukwu Fans kọfị. Anyị na-na ọbụna dere banyere ịtụnanya kọfị ụlọ ahịa Ebe a tupu. Ya mere, ebe a bụ ihe ọzọ na-ede banyere ya dị ka akụkụ nke anyị Great ebe na Europe ileta na March – na London kọfị ememme na March!
The 2019 UK Coffee Week Agbakwuru si 30-31 March 2019. Ndị isi mba na ndị kọfị mara ihe na-ezukọta na Brick Lane iji mee kọfị. A ga-enwe ihe karịrị 250 ọrụ aka kọfị na Gọọmet nri ụlọ, tastings na ihe ngosi, mmekọrịta noo, n'okporo ámá nri, kọfị dabeere cocktails, ndụ music, djs, art ngosi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Chọrọ ịmatakwu ma na-tiketi? Onyeisi ebe a: https://www.londoncoffeefestival.com
Ọzọ Annual March ihe ndị dị na London
Jikọọ na-eme kwa afọ St Devid Day ememe na London na Welsh ọzọ, nri ememme, na Rugby. 1 Mar
Tuck n'ime a na-atọ ụtọ tojupụtara nke pancakes ma ọ bụ crepes on Pancake Day (Shrove Tuesday) na London, ma ọ bụ enwetaghị niile Pancake-ịpịgharị ihe n'oge a Pancake agbụrụ. 5 Mar
Emeso gị mum na a ụbọchị na London on Ụbọchị Ndị Nne. Ị ga-ahụ ọtụtụ fun ihe na-eme na mum, tinyere n'ehihie teas, osimiri cruises, shopping, na egwú. 31 Mar
Sample ọhụrụ beers, ịga omume biya njegharị na mingle na ndị ọzọ cider, biya, mana, na lager Fans na London Beer Izu. TBC
Liège na London Ụgbọ oloko
London March egwuregwu
Secure a ọma ikiri ebe tinyere Thames Championship Course a ọnwa na-ahụ akwọ ụgbọ crews si gburugburu ụwa na-na na Isi nke River Race na Women Eights Isi nke River Race. 16 na 30 Mar
Jikọọ na-agba ọsọ ma ọ bụ na mgbe si sidelines dị ka London akara Ọkara Marathon ifufe ụzọ ya site Westminster na City of London. 24 Mar
N'ihi na ihe Great ebe na Europe ileta na March na London, a lee anya na anyị ihe kalenda na eduzi ka ihe bụ ihe na-na London. Na-enwetaghị ndị kasị mma nke London ogbo na anyị nkiri ndu.
Great ebe na Europe ileta na March: Zermatt na Switzerland
Ọ bụrụ na ị bụghị n'elu Winter oyi na-atụ ma, mgbe Zermatt na Switzerland bụ a mara ezigbo mma nzọ chọta snow. Otu n'ime ndị kasị ama ntụrụndụ na Europe, ntụ ntụ na-abụkarị ihe ọma ruo mgbe ọgwụgwụ nke April.
Dị ka ọtụtụ nke Zermatt si skai ebe ina n'elu 2000 mita, na e nweghị ụkọ snow mgbe ọ na-abịa pulite ski. The snow pụrụ ịbụ patchy na obodo. Otú ọ dị, n’elu ugwu, ị ga-ahụ ihe dị iche iche. Fresh snow, akpatụbeghị tracks, na ọtụtụ fun na- eche ka a chọpụtara. Ka ewere enweta zuru nwere nke ọhụrụ snow, mgbe ọ ka na-anọ mma, iku a skai ndu n'ihi na ụfọdụ anya-piste ski.
Zermatt bụghị naanị ịrịọ ndị na agụụ maka njem, ma ọ na-nwere ụfọdụ magburu onwe omume maka ndị na-erughị adventurous mkpụrụ obi oke. Winter wagharịrị Zermatt-atụle ga-n'etiti kacha mma anyị hụtụrụla na mpaghara. A map nke niile oyi hikes nwere ike ịchọta na Zermatt njem website. Ọ dịghị mkpa maka a ndu, dị ka ụzọ ụkwụ na-ọma akara, groomed, na mma.
Great ebe na Europe ileta na March: Northeast, Holland
Ọ bụrụ na ị na-na na gara n'ubi na London na ịhụ okooko osisi, gịnị mere na-anọgide na-na-emekarị? Enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè na Holland! Holland isua tulip oge ntoju bụ a onu na-adọta ọtụtụ puku ndị njem kwa afọ. Na ezi ihe kpatara! March bụ oké oge gara dị ka ị ga-n'aka uche ìgwè mmadụ. Nke a pụtara na ndị tulips onwe ha nwere ike ịbụ na-apụta dị ka ma. Ị nwere ike ka na-enwe a ikpọ show nke snow ọcha, daffodils, na ọmarịcha pink na violet hyacinth. Nke a mechara pụta na oke dị n'etiti Machị na Eprel. N'ezie, ọnọdụ ihu igwe ịdị iche iche site na afọ, n'ihi ya, ọ kacha mma ka ịkpọ mba raara onwe ya nye tulip website maka kwa izu ifuru mmelite, nke na-amalite na March.
AKWỤKWỌ gị ọzọ ụgbọ okporo ígwè na njem iji Save a Train
Great ebe na Europe ileta na March blog post, kwenyere ị? Ọ gaghị 3 nkeji ma na-achọta a ụgbọ okporo ígwè tiketi on saveatrain.com. Wet ke ụbọchị na oge ị ga-achọ ịga na anyị ga-enye gị na nke kacha mma price maka njem gị, na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ụgbọ oloko gị njem na otutu ụzọ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fgreat-places-europe-march%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#njem #marchtraveleurope europetravel Spring trainjourney ụgbọ okporo ígwè njem ejegharị nje ndi njem uktravel